“အိမ်မှာနေရင်း (၃)ရက်အတွင်းမှာ (၇)ပေါင်ထိ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ ကျနေတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်” - Cele Connections
“အိမ်မှာနေရင်း (၃)ရက်အတွင်းမှာ (၇)ပေါင်ထိ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ ကျနေတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်”
ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး စံရတီ မိုးမြင့်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ စံရတီလေးကတော့ အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်လို လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကျန်းမာရေးလိုက်စားကာ အမိုက်စားဘော်ဒီကောက်ကြောင်းလေးနဲ့ လှပတဲ့ သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းအတွက် ကာရိုက်တာအလိုက် ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ကာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့ သူမရဲ့ အကျင့်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရသူလေးဆိုရင်လည်း မှားမယ် မထင်ပါဘူး..။
စံရတီလေးက လက်ရှိမှာ အိမ်မှာပဲ နေကာ ကျန်းမာရေးအတွက် Gym ကစားနေပြီး ကြွက်သားအတွက် အသားပေးကစားနည်းတွေကို ပုံမှန်လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်နေတာပါ..။ကြွက်သားအတွက် အသားပေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တွေ ကျဆင်းလာတဲ့ အကြောင်းလေးကို “သုံးရက်အတွင်း 121LB to 114Lb” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
လက်ရှိ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် စားသောက်နေထိုင်နေပေမယ့် ဆက်တိုက် အလေးချိန်တွေကျဆင်းနေတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကို ရေးတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်. ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ကိုယ်အလေးချိန်တွေကျဆင်းနေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်လေးကို ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့ ပြောပေးခဲ့ကြပါဦးနော်..။
“အိမျမှာနရေငျး (၃)ရကျအတှငျးမှာ (၇)ပေါငျထိ ကိုယျအလေးခြိနျတှေ ကနြတေယျလို့ ဆိုလာတဲ့ စံရတီမိုးမွငျ့”
ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး စံရတီ မိုးမွငျ့ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ စံရတီလေးကတော့ အရုပျမလေးတဈရုပျလို လှပပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ကနျြးမာရေးလိုကျစားကာ အမိုကျစားဘျောဒီကောကျကွောငျးလေးနဲ့ လှပတဲ့ သူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ..။ ဇာတျရုပျတိုငျးအတှကျ ကာရိုကျတာအလိုကျ ပွောငျးလဲမှုတှကေို လုပျဆောငျကာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနတေတျတဲ့ သူမရဲ့ အကငျြ့လေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ အခဈြပိုနရေသူလေးဆိုရငျလညျး မှားမယျ မထငျပါဘူး..။
စံရတီလေးက လကျရှိမှာ အိမျမှာပဲ နကော ကနျြးမာရေးအတှကျ Gym ကစားနပွေီး ကွှကျသားအတှကျ အသားပေးကစားနညျးတှကေို ပုံမှနျလကေ့ငျြ့လုပျဆောငျနတောပါ..။ကွှကျသားအတှကျ အသားပေးလုပျဆောငျနတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို လုပျဆောငျရငျး ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျတှေ ကဆြငျးလာတဲ့ အကွောငျးလေးကို “သုံးရကျအတှငျး 121LB to 114Lb” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
လကျရှိ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျကနေ ကာကှယျဖို့အတှကျ ကိုယျခံအားကောငျးအောငျ စားသောကျနထေိုငျနပေမေယျ့ ဆကျတိုကျ အလေးခြိနျတှကေဆြငျးနတောကွောငျ့ စိတျညဈနတေဲ့အကွောငျးလေးကို ရေးတငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော. ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ကိုယျအလေးခြိနျတှကေဆြငျးနတေဲ့ စံရတီမိုးမွငျ့လေးကို ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျဖို့ ပွောပေးခဲ့ကွပါဦးနျော..။
“အရင်ကအမိုက်စားဘော်ဒီမျိုး ရတဲ့အထိကို အသေအကျေ Workoutတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပြီး သက်သေပြလိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ”